शाओमी गेटवे - - शाओमी स्मार्ट होमकिट - पछिल्लो हब - स्मार्टमीको समीक्षा
शाओमी गेटवे - - शाओमीको सबैभन्दा नयाँ हबको समीक्षा
अकारा हब, mi hub 3, Xiaomi, xiaomi गेटवे 3
मैले उनलाई लामो समय पर्खें। पहिले उनीहरूले यसलाई नदेखेसम्म, पछि जब यो किन्न सकिन्छ र अन्तमा यो मेरो ढोकामा कसरी आउँदछ। मलाई थाहा छ कि उसले मेरा सबै समस्याहरू समाधान गर्नेछ कि भनेर! सियाओमी गेटवे के हुनेछ 3.. यसलाई तलको समीक्षाबाट सिक्नुहोस् जुन हामी स्मार्ट घरको लागि यस उपकरणको अपरेशन, प्रकार्य र मूल्यांकन प्रस्तुत गर्दछौं।
भर्खरको सियोमी गेटवे Home होम किटको लागि अपेक्षाहरू धेरै थिए। उनले प्रमोशनल सामग्रीहरूमा भारी प्रभाव पारे।364 उपकरणहरू, ब्लुटुथ, Zigbee, Wi-Fi, जाल जडान गर्न संभावना। गेटवेले सबै संचार प्रोटोकलहरू प्रयोग गर्दछ, हामीले यसलाई सोकेटमा सिधा प्लग गर्नु पर्दैन (त्यसैले यो भित्ताबाट टाँसिएन)। केवल एक परिकथा।
शाओमी गेटवे with को साथ पहिलो प्रभाव
प्याकेजिंग र गेटको कार्यान्वयन उच्च गुणवत्ताको हो। बक्स राम्रोसँग सोच्दछ, एप्पल को शैली मा केहि। होमकिट कोड सहि स्थानमा राखिएको छ, र सियाओमी स्मार्ट गेटवे उपकरणहरूको लागि सबै केबलहरू गाडियो। यो राम्रो छ! गेट आफैं पनि धेरै सुन्दर र पूर्ण रूपले न्यून छ। एउटा सानो, सेतो ब्लक अगाडि एउटा बत्तीको साथ। प्लस एक माइक्रो USB केबल (किन USB-C छैन!) र एक प्लग। सबै राम्रो देखिन्छ।
यो गेटको साथ यो सजिलो छ किनकि तपाईंले यसलाई सोकेटमा सिधा सम्मिलित गर्नुपर्दैन। तपाईं एक केबल जडान गर्न सक्नुहुनेछ र गेट आफै शिल्फमा राख्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। यो अकारा हब भन्दा धेरै सौन्दर्य देखिन्छ। हामी सजिलैसँग यसलाई एप्पल टिभी वा सेट-टप बक्सको छेउमा राख्न सक्छौं र यो स्मार्ट घरको लागि पर्यवेक्षण केन्द्रको रूपमा सुन्दर देखिन्छ।
यो अनुच्छेद कहिल्यै थिएन किनभने यो कहिल्यै आवश्यक थिएन। यद्यपि शाओमी गेटवे ले यो हामीलाई बाध्य गर्‍यो। यो किनभने पहिलो कनेक्शन पूर्ण विफलता मा समाप्त भयो। हबले यो सिद्धान्तमा काम गर्दछ कि हामी यसमा "बच्चा" उपकरणहरू थप्दछौं, जस्तै सेन्सरहरू। त्यसोभए यदि तपाईंसँग पहिले लक्ष्य थियो, जस्तै अक्ारा हब, त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्नेछ र तिनीहरूलाई आफ्नो लक्ष्यमा थप्नु पर्छ। सरल सहि लाग्छ? दुर्भाग्यवस, अभ्यासमा, Xiaomi गेटवे यति सजीलो छोड्दैन।
अनुप्रयोगमा गेटवे थप गरे पछि पहिलो समस्या, यदि तपाईंसँग पोलिश भाषामा छ भने, यसको बारेमा थाहा पाउनु हो। यसका धेरै कार्यहरू छन् र ती सबै चिनियाँ भाषामा छन्। स्ट्याम्प्स शाब्दिक रूपमा स्क्रीन बाढी, र तपाईं के हुँदैछ अनुमान लगाउनुहोस्। केही समय पछि, तथापि, तपाईं एक उपकरण थप्न र यो जोडी विकल्प फेला पार्नुहोस्। यहीं समस्या सुरु हुन्छ। पहिलो क्षणमा, मलाई सामान्य ढोका र विन्डो सेन्सर थप्न २ घण्टा लाग्यो! सेन्सर लगातार गेटबाट विच्छेदन गर्दै थियो, जुन यसको बाट एक मिटर टाढा थियो ...
केही समय पछि, यद्यपि, सेन्सर सफलतापूर्वक थपियो र यो चार मोड मध्ये एकमा थप्न सकिन्छ। मलाई तिनीहरूको बिचार केहि थिएन (चिनियाँ टिकट), त्यसैले मैले यसलाई पहिलोमा राखें। यसले काम गर्यो, यद्यपि मलाई थाहा छैन। मैले थप पानी सेन्सर थप्न सुरू गरें। पहिले पहिलो, त्यसपछि दोस्रो। यस बिन्दुमा, पहिलो एक हरायो। त्यसैले मैले पहिलो र तेस्रो फेरि थपेँ। दोस्रो र विन्डो सेन्सर गायब भयो ... केहि समय पछि, मेरो लागि केहि पनि काम गरेन, र अनुप्रयोगले त्रुटि देखायो ... यो संकेत हो कि यो सुत्ने बेला भयो र अर्को दिनको लागि उसलाई मौका दिन। मेरो स्मार्ट घरले केहि समय पर्खनु पर्‍यो - अनुप्रयोग समर्थन मेरो शक्ति भन्दा बाहिरको भयो।
दोस्रो दृष्टिकोण शाओमी स्मार्ट होम किटका लागि
दोस्रो दिन, मैले स्पष्ट लक्ष्यको साथ ताजा उर्जाको साथ Xiaomi गेटवे appro मा सम्पर्क राख्यो। यस पटक म सबै सेन्सर थप्न सक्छु! जे होस्, केही कुराले मलाई छोयो र मैले निर्णय गरें कि म भाषालाई अंग्रेजीमा बदल्ने कोशिश गर्नेछु। नतिजाको रूपमा, मैले व्यक्तिगत कार्यहरूको विवरण जान्न सकें जुन म तपाईंलाई अर्को अनुच्छेदमा वर्णन गर्न सक्छु। सबै सेन्सरहरू कुनै समस्या बिना नै थपियो र सबै कुरा whisk गर्न शुरू भयो। मलाई थाहा छैन कसरी भाषा परिवर्तनले काम गर्‍यो, तर यसले काम गर्‍यो। त्यसैले म तापक्रम, आन्दोलन वा ढोका खोल्नको लागि सेन्सर थप्न सक्दछु।
आवेदन शाओमी स्मार्ट होम किट
अ language्ग्रेजीमा अनुप्रयोग भाषा परिवर्तन गरे पछि, व्यक्तिगत विकल्पहरूको अनुवाद देखा पर्दछ, र त्यहाँ धेरै छन्। सुरुमा त्यहाँ चार अलार्म मोडहरू छन्:
आधारभूत - अनुप्रयोगले नन-स्टपमा काम गर्दछ र सेन्सरहरू त्यससँग जडान हुन्छन् जसले कुनै रुकावट बिना नै खतरा पत्ता लगाउँदछ। शाओमीबाट सेट गरिएको स्मार्ट सेन्सरको अंशको रूपमा, उदाहरणका लागि पानी बाढी सेन्सर वा धुवाँ पत्ता लगाउने उपकरणहरू उपलब्ध छन्।
घरमा - सेन्सरहरू जुन हामी घरमा छनौटमा अलार्म ट्रिगर गर्दछ। उदाहरण को लागी एक लक कोठा? मलाई यो मोड बुझ्नको लागि अलि समस्या थियो।
टाढा (घरबाट टाढा) - सेन्सरहरू जसले अलार्म ट्रिगर गर्दछ तपाईं घरबाट टाढा हुँदा। यी ढोका र विन्डोज (रीड स्विच) वा मोशन सेन्सर खोल्नका लागि सेन्सरहरू हुन सक्छन्।
निन्द्रा (निदाएको बेला) - सेन्सरहरू जुन हामी सुतेको बेला सm्केतको ट्रिगर गर्दछ। तिनीहरू पनि ढोका र विन्डोज (रीड स्विच) वा मोशन सेन्सर खोल्नका लागि सेन्सर हुन सक्छन्।
डिभिजन धेरै जटिल छ र यो उपकरण अपरेट गर्न प्रयोग गरिएको अनुप्रयोगको समस्या हो। हामीले प्रत्येक अलार्म मोडमा उपयुक्त सेन्सरहरू थप्न आवश्यक पर्दछ, थप रूपमा हामी तिनीहरूको नियन्त्रण र भोल्युम नियन्त्रण गर्न सक्दछौं। अकारा हबमा यसले स्वचालित रूपमा काम गर्‍यो, मैले केहि पनि ट्रिगर गर्नुपर्दैन। मेरो लागि यो सामग्री भन्दा अधिक फारम हो।
अलार्म मुनि दुई विकल्पहरू छन्। लगहरू, ट्रिगर गरिएको कार्यहरूको स been्ग्रह, र "बच्चाहरू" उपकरणहरू थप्दै।
गेट सेटि settingsको अंशमा हामी अन्यसँग पनि गर्न सक्छौं व्यक्तिगत अपरेटिंग मोडहरूको लागि विकल्पहरू सेट गर्नुहोस् र HomeKit सँग जोड जोडी बनाउनुहोस्। यी दुई विकल्प बाहेक, त्यहाँ सियोमी विकल्पको आधारमा केहि पनि छैन।
अन्तिम विकल्प ब्लुटुथ गेटवे हो। हामी ब्लुटुथ उपकरणहरू गेटवेमा जडान गर्न सक्छौं र तिनीहरूलाई टाढैबाट नियन्त्रण गर्न सक्छौं। यो धेरै ठूलो प्लस हो।
होमकिट र श्याओमी गेटवे।
तेस्रो जेनरेशन गेटवेसँग अघिल्लो संस्करण जस्तै होमकिट समर्थन छ। तपाईको घरको योजनामा ​​देखिने उपकरणहरूको बीचमा फाटकको अभावमा के तपाईलाई पहिले छक्क लाग्न सक्छ। शाओमी गेटवे and र आकारा हब बीचको मुख्य भिन्नता: पहिलो गेट हो, र दोस्रो गेट फ्यामको साथ अलार्म हो। होमकिटले अकारा हबलाई अलार्मको रूपमा देख्दछ र त्यसैले हामी यसलाई यस तरिकाले गर्न सक्दछौं। शाओमी गेटवे Home होमकिट गेटका लागि हो जुन अदृश्य छ। यो फेला पार्न, हामी हाम्रो घरको सेटिंग्समा जानु पर्छ र त्यहाँ फेला पार्नु पर्छ।
होमकिटको साथ उपकरण जोडी गर्न सजिलो छ। केवल समस्या भनेको सेन्सरको अभाव हो। यद्यपि मैले तिनीहरूलाई धेरै पटक जोडेँ, तिनीहरू होमकिटमा देखिदैनन्। सबै अन्य सेन्सरहरू देख्न सकिन्छ। मलाई केहि धेरै चिन्तित पार्छ अलार्म खोल्न असमर्थता। मैले हरेक पटक Mi Home प्रवेश गर्नुपर्नेछ।
म्याकेजलाई धन्यबाद, हामीसँग पहिले नै गृह सहायकसँग एकीकरणको लागि कार्य मार्ग छ! यद्यपि यसले आईओएस उपकरणहरूको लागि मात्र काम गर्दछ, किनकि हामीले होमकिट प्रयोग गर्नुपर्दछ।
होमकिट कोड मात्र प्रविष्ट गर्नुहोस्, जुन तपाईं गेटको तल र बक्समा फेला पार्नुहुनेछ। पहिले होमकिटद्वारा थपिएका सबै सेन्सरहरू एचएमा पनि देखिनेछ। यो केवल "बच्चाहरू" उपकरणहरूमा लागू हुन्छ। BLE गेटवे मार्फत थपिएका उपकरणहरू यस तरीकाले देखिनेछैनन्।
सियोमी गेटवे every हरेक दिन
केही दिन सञ्चालन पछि गेटले कसरी काम गर्दछ? यसको फाइदा र विपक्ष छ। मसँग यो धारणा छ कि जब यो कनेक्शन स्थिरताको कुरा आउँछ, यो अकारा भन्दा राम्रो छ। अकार संग यो मलाई भयो कि केहि उपकरण संचारबाट बाहिर निस्के। शाओमी गेटवे3को साथ यो त्यहाँ छैन। दुर्भाग्यवस, यो एक मात्र ठूलो प्लस म यो लक्ष्यको मामलामा देख्छु।
एप्पल डोम अनुप्रयोगबाट अलार्म शुरू गर्न असमर्थताले म धेरै दु: खी छु। म महिनौं को लागि यसको प्रयोग गरें, र अब यो गयो। नतिजाको रूपमा, मैले एमआई होम अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र त्यसलाई त्यो स्तरबाट खोल्नु पर्छ। मलाई यो तथ्य मनपर्दैन कि मेरो होमकिटमा पानीको बाढी सेन्सर छैन। यो मेरो लागि अनौंठो अवस्था हो।
गोलको अन्तिम कमि अलार्मको कुरा हो। गेट यसको कार्य हो जस्तो देखिन्छ, तर स्पिकरको सफलता बिना। यसैले हामीले एउटा विशेष तयारी गरेका छौं ट्युटोरियल यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने।
एमआई हब V3 - यसलाई कसारा हबको साथ कसरी गर्ने
Mi Hub V3 Xiaomi को पछिल्लो गेटवे हो। योसँग यसको पूर्ववर्ती वा अकरा गेटको तुलनामा धेरै नयाँ कार्यहरू छन्। यसमा समावेश छ BLE गेटवे वा अधिक समर्थित उत्पादनहरू (तुलनामा 64 XNUMX ...
माफ गर्नुहोस्, तर म फेरि अकरा हबमा आउँदैछु। श्याओमी गेटवे राम्रो छ, तर यसमा मलाई केहि चीजहरू छन्। एप्लिकेसन इन्टरफेस पुन: संयोजित गरीएको छ, र म एप्पल हाउसमा कुञ्जी कार्यहरू छुटाउँछु। हुनसक्छ अर्को संस्करणको साथ शाओमी केहि प्रमाणित मार्गहरूमा फर्किनेछ, र यस बीचमा हामी अकारा एम २ हबलाई पर्खिरहेका छौं।
यदि तपाईं सियामी गेटवे3खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई क्लिक गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ लिङ्क.
२०२० मा सियामी पोलिश मार्केटमा उपकरणहरू
शाओमी गेटवे review लाई समीक्षा गर्दा र होम किटको बारेमा छलफल गर्ने क्रममा, स्मार्ट होमको विषयमा विस्तृत अर्थमा छलफल गर्न लायक छ। कुन चिनियाँ निर्माताको उपकरण अहिले पोलिश बजारमा उपलब्ध छ? कुन उपकरणहरू ध्यान र आदेशको योग्य छन्? यी प्रश्नहरू छन् जुन हामी यस लेखको निरन्तरतामा सँगै खोज्दछौं।
भर्खर सम्म, शाओमी उपकरणहरू केवल पोलिश बजारमा AliExpress वा केहि विक्रेताहरू विदेशबाट उपकरण आयात गर्ने मार्फत गए। २०२० मा, यो विगतको कुरा हो - आधिकारिक अनलाइन स्टोर र शोरूमहरू खोल्ने कारणले गर्दा ग्राहकहरूका सम्भावनाहरू उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। शाओमी फोन सदस्यता लिन सकिन्छ, र यसैले - ब्रान्ड आफैंले धेरै बढी लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादकहरूले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ कि पोलिश बजारमा एक नयाँ प्रतिस्पर्धा देखा पर्दै छ, जुन एक अनुकूल दायरा अनुपातको रूपमा एक व्यापक दायरा र एक धेरै महत्त्वपूर्ण लाभ दुबै द्वारा विशेषता हो।
शाओमी ब्रान्डले स्मार्ट घर उपकरण मात्र भन्दा बढि अनुमति दिन्छ। फ्लागशिप र कम ज्ञात स्मार्टफोनहरू एम आई, रेडमी र पोपोफोन स released्ग्रहमा विमोचन गरिएको धेरै बर्षको लागि लोकप्रिय छ। जबकि सस्ता रूपहरू सामान्यतया बजेट प्रस्ताव हुन्, पछिल्ला मोडेलहरू क्यामेरा वा प्रदर्शनको सर्तमा समेत शान्तपूर्वक धेरै मान्यता प्राप्त ब्रांडहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। स्मार्ट होम किट अपरेट गर्न मोबाइल उपकरण पनि आवश्यक छ।
चिनियाँ निर्माता अधिक र अधिक अक्सर अन्य उत्पादनहरु को संदर्भ मा उल्लेख छ, जस्तै मी लाई एलईडी टिभी आकर्षक मूल्यहरु मा। ग्राहकहरूले एअर १ 13,3..XNUMX "ल्यापटप, वायरलेस हेडफोन र स्पिकर, जिमबलहरू, प्रोजेक्टर वा खेल क्यामेरा जस्ता प्रस्तावहरू पनि प्राप्त गर्दछन्।
पोलिश बजारमा आगामी सियामी प्रधानमन्त्रीहरूको छलफलको संदर्भको मुख्य शब्द "जीवन शैली" हुनुपर्दछ। ब्याकप्याक्स, झोला, सुटकेस वा चश्माले उत्पादहरूको लामो सूची खोल्दछ जुन घर जीवनमा, साथै यात्रा वा कार्य दुवैमा उपयोगी हुन्छ। उदाहरण? तिनीहरू लामो समयको लागि परिवर्तन गर्न सकिन्छ: उपकरण, लेखन उपकरण, पानी फिल्टर, कपाल ड्रायर, हातले पम्प, पावर बैंक, केबुल र एडेप्टर, सेल्फी स्टिकहरू, खेल ब्यान्ड, केटलहरू। र सोच्न कि चिनियाँ बजारमा छनौट धेरै, धेरै फराकिलो छ किनभने शाओमी दर्शनले वास्तवमै धेरै बजार क्षेत्रहरूमा विस्तार धारण गर्दछ।
हामी कसरी सर्कल बनाउँछौं, शाओमी स्मार्ट गेटवे समीक्षाबाट सुरू गरेर स्मार्ट होम किट मुद्दामा फर्किदै। बुद्धिमत्ता उपकरणहरू जसले समय बचत गर्दछ वा सुरक्षा बढाउँछ:
ढोका खुला सेन्सर
र अधिक धेरै। स्मार्ट सेन्सर सेटको कन्फिगरेसनले एप्लिकेसन प्रयोग गरेर स्मार्ट होमलाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावितता खोल्दछ। यो जोड्न लायक छ कि चिनियाँ ब्रान्डले प्रकाश तत्व, भ्याकुम क्लीनर, इलेक्ट्रिक सवारी साधन, भान्छा र बाथरूम उपकरण, राउटरहरू र अन्य धेरै अन्य उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं एकल, दूरबाट व्यवस्थित र स्वचालित स्मार्ट हाउस प्रणालीको हिस्साको रूपमा जडान गर्नुहुनेछ। मलाई टिप्पणीमा थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं अन्य सियाओमी उपकरणहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ र हामी अर्को समीक्षाको तयारी गर्दैछौं!
जिओमीले नयाँ परिचय प्रस्तुत गर्दछ: जीवित
शाओमी नामको कम्पनीले सायद जोड्न पाउनु पर्छ, जसले जैविक दर्शनलाई "जीवन्त" अवधारणासँग मिलाएर कम्पनीको नयाँ र स्फूर्तिदायी दृश्य पहिचानको घोषणा गर्‍यो। नयाँ ब्रान्डिको उद्देश्य प्रीमियम सेगमेन्टमा सियामीको स्थिति सुदृढ पार्नु हो। नयाँ, अधिक गतिशील ...
शाओमीले नयाँ एन्ड्रोइड प्रोजेक्टर पनि देखायो
एमआई स्मार्ट प्रोजेक्टर २ प्रो, प्रोजेक्टर, Xiaomi
यसको अन्तिम कार्यक्रमको दौरान, शाओमीले स्मार्टफोन र नयाँ स्मार्ट ब्यान्ड मात्र प्रस्तुत गर्‍यो। Mi स्मार्ट प्रोजेक्टर २ प्रो भनिने एक रोचक प्रोजेक्टरले पनि दिनको उज्यालो देख्यो। यसले के प्रस्ताव गर्दछ र यसको के हो ...